नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाइ यूएईको डिडिए ग्रूपले गर्यो नगद सहयोग « Postpati – News For All
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाइ यूएईको डिडिए ग्रूपले गर्यो नगद सहयोग
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाइ यूएईको डिडिए ग्रूप अफ कम्पनीले सम्मान सहित जनहीं दस हजार सहयोग गरेको छ । शनिबार दुबाईमा आयोजित सम्मान तथा बिदाई कार्यक्रममा (DDA) कम्पनीको तर्फबाट डा. दिनेश राज आचार्यले जनहीं दस हजार (रु. १०,०००/-) नगद प्रदान गरेका छन् ।
हामी नेपाली एशोसिएसन, एभरेष्ट युएई मार्सल एन्ड स्पोर्ट्स क्लब र नेपाली समाज युएईले संयुक्त रूपमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्मान गरेको थियो । खेलाडीलाई सम्मान स्वरुप नगद सहित प्रमाण पत्र, दोसल्ला र मायाको चिनो प्रदान गरी सम्मान गरिएको हो । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम यूएईको राजधानी आबुधावीमा विश्व क्रिकेट लिग (डब्लुसिएल) च्याम्पियनसिप अन्तर्गत सातौं चरणको खेलमा सहभागी हुन यूएई आएको थियो ।
दुबईस्थित हामी नेपाली एशोसिएसनको कार्यालयमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको सभापतित्वमा (एभरेष्ट क्लब)का उपाध्यक्ष कुन्दन सिहँ, प्रमुख अथिती (हामी नेपाली एशोसिएसन)का अध्यक्ष डा. दिनेश आचार्य, विशिष्ट अतिथीमा (नेपाली समाज)का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद सापकोटा तथा (बिजनेस काउनसिल)का एकेन्द्र थापा उपस्थित थिए । राजेश प्रधान, समिम खान, संजय पाण्डे, लगायत करीब पचास जाना यूएईका क्रिकेटप्रेमी नेपालीहरूको उपस्थिती थियो । कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य नेपाली समाज युएईका सचिव कृष्ण पौडेलले गरेका थिए ।
कार्यक्रमको ब्यबस्थापन एभरेष्ट क्लबका टेक्निकल डाइरेक्टर रबि शाहिले गरेका थिए भने कार्यक्रम संचालन एभरेष्ट क्लबका कोषाध्यक्ष परशुराम घिमिरेले गरेका थिए । कार्यक्रममा जगत बहादुर (प्रशिक्षक), रमन सिवकोटी (टिम म्यानेजर), तथा पारश खड्का (क्यप्टेन नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिम)को तर्फबाट मन्तब्य राखेका थिए । एभरेष्ट क्लबको तर्फ बाट सचिव पुर्ण भक्त लामाले क्लब स्थापनाको बारेमा प्रष्ट पारेका थिए । कार्यक्रममालाई सफल बनाउन बावर्ची रेष्ट्रुरेण्टको ठुलो सहयोग रहेको रबि शाहिले बताए ।
२४ मंसिर २०७४, आईतवार को दिन प्रकाशित